आज भदौ २२ गते सोमबारदेखि २८ गते आइतबारसम्म कुन राशिलाई कति शुभ ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल ! – Butwal Sandesh
आज भदौ २२ गते सोमबारदेखि २८ गते आइतबारसम्म कुन राशिलाई कति शुभ ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल !
कार्यक्षेत्रमा समय अत्यन्त शुभ रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। आर्थिक खर्चमा वृद्धि हुँदा आर्थिक स्थिति कमजोर रहन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। परिवारमा अशान्ति वातावरण रहन सक्छ। यात्रा गर्दा निकै सतर्क रहनुपर्ने देखिन्छ। हप्ताको अन्त्यतिर भने समय अनुकूल रहनेछ।
परिवारमा सुख-शान्तिमय समय रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा सुमधुरता छाउनेछ। स्त्री वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नति गर्नको लागि कडा परिश्रम गर्नु पर्ने देखिन्छ। यात्राको योग बन्नेछ, जसबाट विशेष लाभ पनि मिल्ने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक मामलामा सफलता मिल्नेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ, ध्यान दिनुहोला। हप्ताको अन्त्यमा मन निकै प्रशन्न रहनेछ।
कार्यक्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्ने देखिन्छ र हप्ताको सुरुवातमै यस क्षेत्रबाट शुभ समाचार मिल्ने सम्भावना छ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। बुवा सम्बन्धि विषयले मन चिन्तित रहनेछ। यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। परिवारमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। पूरा हप्ता लाभदायी रहनेछ र अन्त्यमा केहि शुभ समाचार मिल्ने देखिन्छ।
परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा समय अनुकूल नरहला। आर्थिक पक्ष कमजोर रहने देखिन्छ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। स्त्री वर्गको कारण अनावश्यक खर्च पनि हुनसक्छ। प्रेम सम्बन्धमा थोरै सावधानपूर्वक कुराकानी गर्नु पर्ला। यात्राको योग बन्ने देखिन्छ। मानसिक तनाब बढ्नेछ र शारीरिक रूपले पनि अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ।
कार्यक्षेत्रमा उन्नति हुने देखिन्छ। रचनात्मक क्षेत्रमा सफलता हासिल हुनेछ। स्त्री वर्गबाट सहयोग मिल्नेछ। आर्थिक व्यय अत्याधिक रहँदा आर्थिक समस्याले सताउन सक्छ। परिवारमा सुख समृद्धि बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्छ। तपाईंको कुशल बोल्ने शैलीको कारण मानिस प्रभावित हुनेछन्। प्रेम सम्बन्धमा सुमधुरता छाउनेछ।
प्रेम सम्बन्ध मजबूत हुनेछ। स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार आउनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि हप्ता अनुकूल रहनेछ। यो हप्ता गरिएको यात्राले विशेष सफलता मिल्ने देखिन्छ। आर्थिक मामलामा हानि हुने सम्भावना रहेको छ। कुनै कुरालाई लिएर मन चिन्तित रहला। हप्ताको अन्त्यमा आफन्तको कारण मन चिन्तित रहन सक्छ।
प्रिय व्यक्तिसंगको भेटले मन प्रशन्न रहनेछ। रमणीय यात्राको योग बन्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्य पनि सफल रहने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा केहि अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। साथीहरुसंग रमणीय भेटको अवसर मिल्नेछ। प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ हुनेछ। हप्ताको अन्त्यमा भने कुनै कारणवश मन चिन्तित रहला।
परिवारमा सुख समृद्धिको शुभ संयोग बन्नेछ। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि समय अत्यन्त शुभ रहेको छ। रमणीय यात्राको योग देखिन्छ, जसबाट लाभ पनि मिल्ने सम्भावना रहेको छ। पूँजी निवेश गर्नको लागि समय शुभ रहनेछ। आर्थिक लाभ मिल्नेछ। सन्तानको स्वास्थ्य चिन्ताको विषय बन्नसक्छ। कार्यक्षेत्रमा समय अनकूल रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा उतार-चढ़ाव आउनेछ।
आर्थिक दृष्टिकोणले धन लाभ मिल्ने सम्भावना छ। पूँजी निवेश गरेको ठाउँबाट सकारात्मक परिणाम आउनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा समय सोचे जस्तो अनुकूल नरहला। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि समय शुभ छैन। परम सम्बन्धमा सुमधुरता छाउनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। यो हप्ता गरिएको यात्राबाट लाभ मिल्नेछ। पूरा हप्ता समग्रमा अनुकूल रहनेछ।
परिवारमा आनन्दमय समय बित्नेछ। आर्थिक मामलामा शुभ समाचार मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा तपाईको लगातार प्रयास सफल हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ, ध्यान दिनुहोला। स्त्री वर्गको स्वास्थ्यलाई लिएर मन चिन्तित रहन सक्छ। यात्रा गर्दा विशेष सावधान रहनुहोला। हप्ताको अन्त्यमा भावातात्मक रूपले कमजोरी महशुस हुनसक्छ।
आर्थिक रूपले यो हप्ता अनुकूल रहनेछ। धन लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ। कार्य सफलता पाउन निकै मिहेनत गर्नुपर्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा सुमधुरता छाउनेछ। स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउने देखिन्छ। पारिवारिक मामलालाई लिएर मन चिन्तित रहन सक्छ। यात्रा गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला।
आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा समय अत्यन्त शुभ रहनेछ। शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वस्थ रहनुहुनेछ। परिवारका साथ आनन्दमय समय बित्नेछ। यात्राको लागि समय अत्यन्त अशुभ रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध मजबूत हुनेछ। हप्ताको अन्त्यमा स्त्री वर्गको कारण मन चिन्तित रहनसक्छ।